China Diesel Injini Yakareba Shaft Vertical Turbine Moto Pump fekitori uye vagadziri | Tongke
Nyatsonongedza pombi yemvura
Kuzvidzivirira kwepombi pombi
Yakareba shaft pombi
Pombi yemvura yegungwa
Pombi yekurwisa moto
Dhiziri Injini Yakareba Shaft Vertical Turbine Moto Pump
Muenzaniso Nha: XBC-VTP
XBC-VTP Series yakatwasuka refu shaft moto kurwisa pombi dzakateedzana imwe nhanho, multistage diffusers mapombi, akagadzirwa zvinoenderana neazvino National Standard GB6245-2006. Isu takavandudzawo dhizaini nereferenzi yeyakajairika United States Moto Dziviriro Association. Inonyanya kushandiswa pamoto wemvura mu petrochemical, gasi rechisikigo, chigamba chemagetsi, machira ekotoni, chiteshi chengarava, ndege, yekuchengetera, chivakwa chepamusoro-soro uye mamwe maindasitiri. Inogona zvakare kushanda kune ngarava, gungwa tangi, ngarava yemoto uye dzimwe nguva dzekupa.
Single Danho magumo kubvisa Centrifugal mhando NFPA FM Fi ...
API610 ANSI Chemical Maitiro Akajairwa Petrochemical ...
MS Electrical High Pressure multistage yakachena mvura c ...
Horizontal Split casing centrifugal mvura yegungwa destin ...
Submersible Tsvina tsvina Mvura Yakanyura Pump
MVS Vertical Axial kuyerera uye Muvhenganiswa kuyerera submersible s ...
Yenharembozha mota Diesel injini Dhiraivha Se Se ...
♦ Pombi, mutyairi, uye mutongi akaiswa pane yakajairika base.
♦ Yese baseplate yuniti inobvisa kudiwa kwenzvimbo dzakasiyana dzekumisikidza.
♦ Yuniti unit inoderedza kukosha kwekubatanidza wiring uye gungano.
♦ Midziyo inosvika mukutakura kwakabatanidzwa, ichibvumidza- ing nekukurumidza uye kwakareruka kumisikidza nekubata.
♦ Tsika yakagadzirirwa sisitimu, kusanganisira zvishongedzo, fittings, uye marongero anowanikwa kusangana nevatengi maratidziro.
TKFLO Vertical Turbine Moto Pump Azvakanakira:
♦ Neyemberi hydraulic dhizaini uye dhizaini, kutora Ashland maitiro ekumisikidza chipasa, kutora epoxy kupfeka maitiro mune impeller vane, uye zvine musoro kusarudzwa kwezvinhu, gonesa pombi kuve neakanakisa kuita uye hupenyu hwakareba.
Device Whirl sand sand mudziyo uye maze-senge chimiro inoita kuti jecha risakwanise kupinda mumabhegi.
♦ Injini dzedhiziri dzese ndedzemumba kana kupinza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvine hunhu hwehunhu hwakanaka hwekutanga, kugona kwakasimba kwekuwandisa, chimiro chakasimba, chinogadziriswa, chiri nyore kushandisa, uye chakazvigadzirira.
Iyo TONGKE Pump Moto Pombi Zvikamu, Maitiro, uye Mapakeji Maitiro
TONGKE Fire Pombi kuiswa (UL kwakatenderwa, Tevedza NFPA 20 uye CCCF) kununura yakanyanya kuchengetedza moto kuzvivakwa pasirese. TONGKE Pump yanga ichipa basa rakazara, kubva pakubatsira kweinjiniya kusvika mukugadzira kweimba kusvika kumunda kutanga. Zvigadzirwa zvakagadzirwa kubva pasarudzo yakasarudzika yemapombi, madhiraivha, madhairekitori, mahwendefa epasi uye zvishongedzo. Pombi sarudzo dzinosanganisira yakatwasuka, mu-mutsetse uye kumagumo kukweva centrifugal moto pombi pamwe nekutwasuka turbine pombi.
Ose ari maviri akatwasuka uye akatwasuka mamodheru anopa kugona kusvika zviuru zvishanu gpm. End yekukweva mamodheru anounza kugona kusvika 2,000 gpm. Mune-mutsara zvikamu zvinogona kuburitsa 1,500 gpm. Musoro unotenderera kubva pa100 ft kusvika ku1,600 ft neakawanda seanosvika mazana mashanu emamita. Pombi dzinofambiswa nemagetsi emagetsi, mainjini edhiziri kana emhepo turbines. Pombi dzemoto dzakajairika ndeyeDuctile yakakanda simbi ine ndarira. TONGKE inopa izvo zvinoiswa uye zvishongedzo zvinokurudzirwa neNFPA 20.
Zvishandiso zvinosiyana kubva kudiki, yakakosha mota yemagetsi inotyaira kune dhiziri injini inotyairwa, yakarongedzwa masystem. Maiyuniti akajairwa akagadzirirwa kubata mvura nyowani, asi zvakakosha zvinhu zviripo zvemvura yegungwa uye zvakasarudzika zvemvura zvinoshandiswa.
Iyo TONGKE Moto Mapombi anopa akakurisa kuita mune Zvekurima, General Indasitiri, Kuvaka Kutengesa, Simba Indasitiri, Moto Dziviriro, Manisipari, uye Maitiro mafomu.
Iwe wafunga kudzikisa njodzi yekukuvara kwemoto kunzvimbo yako nekuisa UL, ULC yakanyorwa moto pombi sisitimu. Sarudzo yako inotevera ndeyekuti ndeipi system yekutenga.
Iwe unoda pombi yemoto inoratidzirwa mukuisirwa pasirese. Yakagadzirwa nehunyanzvi ane ruzivo rwakakura mumunda wekuchengetedza moto. Iwe unoda kuzara sevhisi kumunda kutanga-up. Iwe unoda TONGKE Pump.
Kupa Pumping Solutions TONGKE Inogona Kuzadzisa Yako Zvinodiwa:
Zadzisa in-imba nhema yekugona
Mechanical-run bvunzo kugona nemutengi yakashongedzerwa michina kune ese NFPA zviyero
Mhando dzakatwasuka dzemagetsi kusvika pa2,500 gpm
Vertical mamodeli emagetsi kusvika 5,000 gpm
Mune-mutsara mamodheru emagetsi kusvika 1,500 gpm
End yekukweva mamodheru emagetsi e1 500 gpm
Anotyaira: mota yemagetsi kana injini yedhiziri
Basic zvikamu uye zvakapakirwa masisitimu.
Moto Pombi Zvikamu & Mapakeji Masystem
Electric Motor Drive uye Diesel Injini Drive pombi dzemoto dzinogona kupihwa kune chero mubatanidzwa wepombi, dhiraivha, zvinodzora uye zvishongedzo zvezvakanyorwa uye zvakabvumidzwa uye ZVISINA kunyorwa moto basa rekushandisa. Yakaiswa zvikamu uye masisitimu epasi moto pombi yekumisikidza mutengo uye nekupa izvi
Kusangana nezvakakurudzirwa nematanho eNational Fire Protection Association sekuburitswa kwavo muPamphlet yavo 20, yazvino edition, zvimwe zvishongedzo zvinodiwa kune ese mapombi emoto kuiswa. Izvo zvinosiyana, zvisinei, kuti zvienderane nezvinodiwa zveumwe neumwe kuiswa uye nezvinodiwa nezviremera zveinishuwarenzi zvemuno. Tongke Pump inopa akasiyana siyana mapombi emoto anosanganisira: concentric discharge increaser, casing relief valve, eccentric suction reducer, kuwedzera kuburitsa tee, kufashukira koni, hosi vharuvhu musoro, mavhavha evharuvhu, hosi vheji vheji uye ngetani, kubvisa uye kubuda gaji, vharafu yekuyamura, otomatiki mweya kuburitsa vharafu, kuyerera mita, uye bhora redhi vharafu. Hazvina mhosva kuti ndezvipi zvinodiwa, Sterling ine mutsetse wakazara wezvishongedzo zviripo uye inogona kugutsa zvinodiwa zveumwe neumwe kuiswa.
Machati akaburitswa pazasi anoratidza zvakajeka zvishongedzo zvakawanda pamwe nemadrive ekusarudza ayo anowanikwa nemapombi emoto ese eTongke uye masisitimu akapakurwa.
Q. Chii chinoita kuti pombi yemoto yakasiyana nemamwe marudzi emapombi?
Kutanga, vanosangana nezvinodiwa zvakaomarara zveNFPA Pamphlet 20, Underwriters Laboratories uye Factory Mutual Research Corporation yekuvimbika uye basa risingakundike pasi pemamiriro akaomesesa uye anodzvinyirira. Ichi chokwadi chega chinofanira kutaura zvakanaka nezveTKFLO's chigadzirwa mhando uye premium dhizaini maficha. Mapombi emoto anodikanwa kuti abudise chaiwo mafambiro ekuyerera (GPM) uye kumanikidza kwe40 PSI kana kupfuura. Kupfuurirazve, masangano ataurwa pamusoro anoraira kuti mapombi anofanira kuburitsa inosvika makumi matanhatu neshanu muzana yeiyo kumanikidza pa150% yekuyerera kwakayerwa - uye nguva yese iyi ichishanda padanho rekusimudzira tsoka gumi neshanu. Iwo ma curves ekuita anofanirwa kunge akadaro zvekuti musoro wakavharwa, kana "churn," unobva pa101% kusvika ku140% yemusoro wakarongwa, zvichienderana nedudziro yesangano yezwi iri. Mapombi emoto eTKFLO haana kupihwa kuitira pombi yemoto kunze kwekunge yasangana nezvinodiwa nemasangano.
Kunze kwekuita kwehunhu, mapombi emoto eTKFLO anonyatsoongororwa neveNFPA neFM kuti ivimbike uye nehupenyu hwakareba kuburikidza nekuongorora dhizaini yavo uye kuvaka. Casing kuvimbika, semuenzaniso, inofanirwa kuve inokodzera kumira muyedzo wehydrostatic katatu zvakapetwa zvakanyanya kushanda kwekumanikidza pasina kuputika! TKFLO's compact uye yakanyatsogadzirwa dhizaini inotibvumidza kugutsa iyi tsananguro nevazhinji vedu 410 uye 420 mamodheru. Maverengero einjiniya ekutakura hupenyu, bhaudhi kushushikana, shaft deflection, uye shear kushushikana kunofanirwa kuendeswa kuNFPA. uye FM uye inofanirwa kuwira mukati memiganhu inochengetedza kuti ive nechokwadi chekuvimbika. Chekupedzisira, mushure mekunge zvese zvekutanga zvinodiwa zvasangana, pombi yakagadzirira kuyedzwa kwekupedzisira kupupurirwa kuti kupupurirwe nevamiriri kubva kuUL uye FM Performance bvunzo zvinoda kuti madhayamita mazhinji emupangiri aratidzwe zvinogutsa, kusanganisira hushoma uye hukuru, uye akati wandei pakati.
Q. Ndeipi yakajairwa nguva yekutungamira yepombi yemoto?
A. Chaidzo nguva dzekutungamira dzinomhanya kwemasvondo mashanu kusvika masere kubva pakuburitswa kwechirongwa. Dana isu kuti uwane ruzivo.
Q. Ndeipi nzira iri nyore yekumisa pombi kutenderera?
A. Kuti pombi yemoto yakatsemuka yakatsemuka, kana iwe ugere pamota wakatarisana nepombi yemoto, kubva panzvimbo ino pombi pombi iri kurudyi-ruoko, kana kuchenjera wachi, kana kukweva kuri kuuya kubva kurudyi uye kubuda iri kunanga kuruboshwe. Izvo zvakapesana ndezvechokwadi kuruboshwe-kuruboshwe, kana kupesana nemaawa kutenderera. Chinokosha ndiyo nzvimbo yekuona pakukurukura uyu musoro wenyaya. Ita shuwa kuti mapato ese ari kuona pombi casing kubva kudivi rimwe.
Q. enginjini uye mota dzakakura sei pamapombi emoto?
A. Mota uye injini dzinopihwa mapombi emoto eTKFLO akaenzana maererano neUL, FM neNFPA 20 (2013), uye akagadzirirwa kushanda pane chero pombi yemoto pombi isina kudarika mota nameplate sevhisi chinhu, kana saizi yeinjini. Usanyengedzwe mukufunga kuti mota dzakakura chete kusvika pa150% yezita replanet. Hazvina kujairika kuti mapombi emoto ashande mushe kupfuura 150% yeakaganhurwa kugona (semuenzaniso, kana paine yakavhurika yemvura kana yakaputswa pombi pazasi).
Kuti uwane zvimwe zvakawanda, ndapota tarisa kuNFPA 20 (2013) ndima 4.7.6, UL-448 ndima 24.8, uye Factory Mutual's Approval Standard yeSplit Case Fire Pumps, Kirasi 1311, ndima 4.1.2. Ese mota uye injini dzinopihwa neTKFLO mapombi emoto akaenzana kuchinangwa chechokwadi cheNFPA 20, UL, uye Factory Mutual.
Sezvo moto wepombi mota hautarisirwe kunge uchimhanya uchienderera, iwo anowanzo kuve saizi kutora mukana weiyo 1.15 mota sevhisi chinhu. Saka kusiyana nemvura yekumba kana HVAC pombi kunyorera, moto pombi mota haigare iri saizi "isiri-kuwandisa" mhiri kwekona. Chero bedzi iwe usingapfuuri mota 1.15 sevhisi chinhu, chinotenderwa. Kunze kweizvi ndipo panoshandiswa chinomhanyisa kumhanya inverter basa magetsi mota inoshandiswa.
Q. Ini ndinogona kushandisa kuyerera mita chiuno sechibatiso cheyedzo musoro?
A. Inoyerera mita chiuno chinowanzo shanda uko kuyerera kwakanyanyisa mvura kuburikidza neyakajairika UL Mepipe yemapaipi isinganetsi; zvisinei, paunenge uchishandisa yakavharika kuyerera kwemamita chiuno kutenderedza pombi yemoto, unogona kunge uri kuyedza mapombi e hydraulic performance, asi HAUYE kuyedza kupihwa kwemvura, chinova chinhu chakakomba chemoto pombi system. Kana paine chinovhiringidza kumvura, izvi hazvizove pachena nekuyerera kwemamita chiuno, asi zvinonyatso kufumurwa nekuyedza pombi yemoto ine hosipa uye Playpipes. Pakutanga kwekutanga kwepombi pombi yemoto, tinogara tichimanikidza kuyerera kwemvura kuburikidza nesystem kuti tione kuvimbika kwesystem yese.
Kana kuyerera kwemamita chiuno kuchidzoserwa kunzvimbo yemvura - senge tangi remvura repasi-pasi - ipapo pasi pegadziriro iyoyo unozokwanisa kuyedza zvese pombi yemoto uye mvura. Ingo ita chokwadi chekuti yako kuyerera mita yakanyatsoyerwa.
Q. Ini ndinofanira kunetseka nezve NPSH mumoto pombi kunyorera?
A. Kazhinji. NPSH (mambure akanaka ekutsveta musoro) yakakosha kutarisisa mumaindasitiri mafomu, senge bhaira feed kana pombi dzemvura inopisa. Nemapombi emoto, zvisinei, uri kubata nemvura inotonhorera, iyo inoshandisa ese emhepo mhepo kumanikidza kwako. Mapombi emoto anoda "kukweva kwakazara," uko mvura inosvika kune iyo pombi impeller kuburikidza negiravhiti. Iwe unoda izvi kuvimbisa pombi prime 100% yenguva, kuitira kuti kana iwe uine moto, yako pombi inoshanda! Zvinokwanisika kuisa pombi yemoto ine vharafu yetsoka kana imwe nzira yekugadzira, asi hapana nzira yekuvimbisa 100% kuti iyo pombi inoshanda mushe painodaidzwa kuti ishande. Mune mazhinji akapatsanurwa-kesi mapombi ekutsveta maviri, zvinongotora ingangoita 3% yemhepo muhombodo yepombi kupa iyo pombi isingashande. Nechikonzero ichocho, hausi kuzowana mugadziri wepombi yemoto anoda kuisa panjodzi pakutengesa pombi yemoto kune chero kuiswa kusingavimbise "kukweva kwakazara" kupombi yemoto nguva dzese.
Q. Uchapindura rini mimwe mibvunzo pane ino FAQ peji?
A. Tichavawedzera panomuka nyaya, asi inzwa wakasununguka kuti utaure nesu nemibvunzo yako!
Pashure: API610 ANSI Chemical Maitiro Akajairwa Petrochemical Heavy Crude Fuel Oiri Kutamisa Pump
Zvadaro: LDP Series Imwe-Stage End-Suction Horizontal Centrifugal Yakachena Mvura Mapombi
Kukwanisa 20-1400 m3/ h
Kushanda Kushanda kusvika ku2.0Mpa
Dhayamita DN 25-400 mm
Liquid mvura yakachena kana yemuviri uye yemakemikari mvura Inorerekera mvura, PH = 6.5-8.5, chloride ion zvemukati = 400mg / l, tembiricha yepakati iri pasi pe40 ℃
Pombi yekumhanyisa 1000-3600 RPM
Injini Cummins, Deutz, Perkin kana imwe mhando yeChina
Bowl: Cast simbi, Stainless simbi
Mugodhi: Stainless simbi
Impeller: Cast simbi, Bronze kana Stainless simbi
Kubuda musoro: Kandira simbi kana kabhoni simbi
Inonyanya kushandiswa pamoto wemvura mu petrochemical, gasi rechisikigo, chigamba chemagetsi, machira ekotoni, chiteshi chengarava, ndege, yekuchengetera, chivakwa chepamusoro-soro uye mamwe maindasitiri. Inogona zvakare kushanda kune ngarava, gungwa tangi, ngarava yemoto uye dzimwe nguva dzekupa.
Shanghai Tongke Kuyerera Technology Co, LTD
Munhu Wekubatana: Mr Seth Chan
Single Danho magumo kubvisa centrifugal mhando NFPA ...
Multistage Moto Pump Stainless Simbi Zvinhu ...
Multisatge yakanyanya kumanikidza centrifugal moto pombi
Split casing kaviri kubvisa mhando NFPA UL FM fir ...
Factory Kero: Kwete .111, Shenjiabang Road, Qingpu Dunhu, Shanghai, China
Fonera Isu Zvino:
Nhare & WhatsApp: 0086-13817768896